University of Texas e Austin, i-USA - Fumana imfundo kwelinye ilizwe
University of Texas e Austin
IYunivesithi yaseTexas kwiiNkcukacha zeAustin
isixeko : Austing
isifinyezo : UMDLALO
Owadala : 1883
abafundi (nama.) : 51500
Musa ukulibala ukuba Xoxa ngeDyunivesithi yaseTexas eAustin
Bhalisa kwiYunivesithi yaseTexas eAustin
IYunivesithi yaseTexas eAustin liziko likarhulumente elasekwa ngaphakathi 1883.
Imirhumo yezifundo kwiDyunivesithi yaseTexas e-Austin ngu $35,000 (Aprox.).
Yonke inkulu eTexas, njengoko isitsho njalo, kwaye kwenene kwi IYunivesithi yaseTexas eAustin, omnye kwizikolo likhulu uhlanga. Isikolo yeyona nkqubo inkulu lesiGrike elizweni, ezimbini iimpapasho inkulu umfundi kwaye ngaphezu 900 kwiiklabhu nemibutho abafundi. I-UT kwiqela lezemidlalo lase-Austin likhuphiswano oludumileyo kwiCandelo I elikhulu 12 inkomfa, ixhaswa ikhubalo Bevo le Longhorn. The UT Tower, isakhiwo campus ephakamileyo, ngofinyafuthi kwi orange umbala elinyukayo yesikolo emva impumelelo emidlalo eziphawulekayo kwaye bomvu i '# 1' xa iqela liyifumene Championships yesizwe. Freshmen musa ukuba baphile ekhampasini, kwaye angakhetha ukuhlala yiPort Austin, imi malunga imayile kwikota kude. Isixeko esidlamkileyo yaziwa ngomculo wayo, ukutya, imisebenzi yangaphandle kunye Nightlife, kwaye abafundi bahambe simahla kwi ezibhasini Capitol Metro kunye nobungqina ID.
UT yahlulwe 18 izikolo kunye neekholeji, inkulu kuzo ke College of Arts Lutho. iinkqubo ophumelele UT ngayo zibandakanya kakhulu zichongwe McCombs School of Business, College of Education, Cockrell School of Engineering, College of Arts Fine, School Lokonga, Ikholeji yePhemesti kunye neSikolo soMsebenzi wezeNtlalontle, ukongeza kwiSikolo kakuhle kuthathwa soYilo. UT inika amakhulu zokufunda iinkqubo aphesheya, kunye kwiindawo ezininzi ethandwayo ukuba Spain, ElamaTaliyane, United Kingdom, EFransi China. alumni ziquka owayesakuba umphanda Roger Clemens, weqonga Mateyu McConaughey bhanya-bhanya “The Wedding Planner” yaye “Indlela Lose onjeya kwi 10 Days” kunye nowayesakuba kuqala lady Laura Bush.
College of Arts Lutho
UJackson weSikolo seGeosciences
ISikolo se-LBJ seMicimbi yoLuntu
McCombs iSikolo soShishino
Ikholeji yaseMoody yoNxibelelwano
Isikolo seZidanga zabaDala
Ukukhankanywa okokuqala kweyunivesithi kawonkewonke eTexas kunokutsalwa 1827 umgaqo-siseko welizwe laseMexico iCoahuila y Tejas. Nangona Isihloko 6, Inqaku 217 Walo Mgaqo-siseko wathembisa ngokuseka imfundo yoluntu kubugcisa nesayensi, Akukho manyathelo athathwe ngurhulumente waseMexico. Emva kokuba iTexas ifumane inkululeko yayo eMexico 1836, I-Texas Congress yamkele uMgaqo-siseko weRiphabliki, leyo, phantsi kwecandelo 5 yezibonelelo zayo ngokubanzi, ichaziwe “Iya kuba ngumsebenzi weCongress, ngokukhawuleza iimeko ziya kuvuma, ukunikeza, ngomthetho, inkqubo yemfundo ngokubanzi.” ngoAprili 18, 1838, “Umthetho wokuseka iYunivesithi yaseTexas” wabhekiswa kwikomiti ekhethekileyo yeCongress yaseTexas, kodwa khange kuxelwe kubuyelwe phambili. ngoJanuwari 26, 1839, Inkomfa yaseTexas yavuma ukubeka ecaleni amasimi angamashumi amahlanu omhlaba (malunga. 288,000 leendima) kusekwe eyunivesithi exhaswa ngurhulumente. Ukwengeza, 40 leendima (160,000 m2) kwikomkhulu elitsha iAustin zigcinwe zaza zachongwa “Ikholeji yaseKholeji.” (Igama elithile “Amashumi amane e-Acres” isetyenziselwa ukubhekisa kwiYunivesithi xa iyonke. Indawo eyi-40 yeehektare yindawo ukusuka eGuadalupe ukuya kwisantya kunye nesitrato sama-21 ukuya kwisitrato sama-24 )
in 1845, I-Texas yathunyelwa e-United States. Okubangel 'umdla kukuba, uMgaqo-siseko welizwe we 1845 akaphumelelanga ukukhankanya umxholo wemfundo ephezulu. ngoFebruwari 11, 1858, iSixeko saseTexas seSixeko samkelwe ngo-O.B. 102, isenzo sokuseka iYunivesithi yaseTexas, ezibekele ecaleni $100,000 E-United States iibhondi zokwakha eyunivesithi yokuqala exhaswa ngemali nguRhulumente(i $100,000 Ulwabiwo oluvela kwi $10 Isigidi ilizwe sifumene ngokubhekisele kuKhuphiswano lwe 1850 kunye neTexas’ ukuyeka amabango kumhlaba ongaphandle kwemida yangoku). Ukwengeza, indlu yowiso-mthetho ekhethiweyo ebekelwe ukukhuthaza ulwakhiwo lukaloliwe isiya kulwakhiwo lweyunivesithi. ngoJanuwari 31, 1860, indlu yowiso-mthetho, Ukufuna ukunqanda ukunyusa irhafu, wadlula isenzo esigunyazisa imali ebekelwe iYunivesithi yaseTexas ukuba isetyenziselwe ukhuselo lomda entshona eTexas ukukhusela abahlali kuhlaselo lwaseIndiya. Texas’ Isivumelwano esivela kwi-Union nakwiMfazwe yaseMelika silibazisa ukubuyisa imali ebibolekiwe. Ekupheleni kweMfazwe yeLizwe kwi 1865, IYunivesithi yaseTexas’ amandla okubandakanya kubandakanya ngaphezulu $16,000 kwiiwaranti kwaye akukho nto yenziweyo yenziweyo ukuze kulungiswe imisebenzi eyunivesithi. Le nzame zokuseka iYunivesithi yagunyaziswa yiNqaku 7, Icandelo 10 yoMgaqo-siseko waseTexas wase 1876 eyalele indlu yowiso-mthetho kuyo “qala, lungiselela kwaye ulungiselele ulondolozo, Inkxaso kunye nolwalathiso lweyunivesithi yeklasi yokuqala, ibekwe ngevoti yabantu beli Lizwe, kwaye yenziwe isitayile “IYunivesithi yaseTexas.” Ukongezelela, Inqaku 7, Icandelo 11 ye 1876 Umgaqo-siseko wamisela iNgxowa-mali yeYunivesithi esisigxina, Ingxowa mali yobutyebi ezimeleyo ilawulwa yiBhodi ye Regents ye Dyunivesithi yase Texas kwaye inikezelwe kulondolozo lweyunivesithi. Kuba abanye abezomthetho bakarhulumente babona ubuqhetseba kulwakhiwo lwezakhiwo ezizezinye iidyunivesithi, Inqaku 7, Icandelo 14 kuMgaqo-siseko ayithintele ngokucacileyo indlu yowiso-mthetho ukuba isebenzise ingeniso karhulumente ngokubanzi ukuxhasa ngemali ukwakhiwa kwezakhiwo zeyunivesithi. Iimali zokwakha izakhiwo zaseyunivesithi bezifanele ukuba zivela kwiidyunivesithi okanye zizipho zabucala ziye eyunivesithi, kodwa inkcitho yokusebenza eyunivesithi inokuthi ivele kwiingeniso zikarhulumente ngokubanzi.
the 1876 UmGaqo-siseko ubuye ukubuyiselwa kwamalungelo oMgaqo kaloliwe woMthetho 1858 kodwa bazinikezele 1,000,000 leendima (4,000 km2) umhlaba, kunye nenye ipropathi eyabiwe eyunivesithi, kwiNgxowa-mali yeDyunivesithi esisigxina. Oku kwaba yingozi enkulu eyunivesithi njengoko imihlaba yanikwa yunivesithi nguMgaqo-siseko 1876 imelwe ngaphantsi 5% Ixabiso lemihlaba enikezwe eyunivesithi phantsi komThetho 1858 (imihlaba ekufutshane neendlela zikaloliwe yayixabiseke kakhulu ngelixa imihlaba eyabelwe iyunivesithi yayikumantla eTexas, kude nemithombo yothutho kunye namanzi). Umhlaba oxabiseke ngakumbi ubuyiselwe kwingxowa-mali ukuxhasa imfundo ngokubanzi kurhulumente (Ingxowa-mali yeSikolo esiKhethekileyo). ngoAprili 10, 1883, indlu yowiso-mthetho yongeza enye yeNgxowa-mali yeYunivesithi 1,000,000 iihektare zomhlaba entshonalanga eTexas ngaphambili zinikezwe i-Texas kunye nePacific Railroad kodwa zibuyele kurhulumente njengebonakala zingenamsebenzi kangako ukuba zingavavanywa.. Indlu yowiso-mthetho yongezwa ngokufanelekileyo $256,272.57 ukubuyisa imali ebithathwe eyunivesithi 1860 Ukuhlawula ukhuselo lomda kunye notshintshelo kwiNgxowa-mali yePhondo ngokubanzi 1861 yaye 1862. the 1883 isibonelelo somhlaba sonyusa umhlaba kwiNgxowa-mali yeDyunivesithi esisigxina phantse 2.2 izigidi zeehektare. Phantsi koMthetho we 1858, iyunivesithi inelungelo lokugqitha 1,000 iihektare zomhlaba kuyo yonke imayile yoololiwe eyakhiweyo kurhulumente. Ukuba yayinokuqala 1858 Isibonelelo somhlaba esingarhoxiswanga 1876 umgaqo-siseko, ngokuthi 1883 imihlaba yaseyunivesithi ngeyibaliwe 3.2 izigidi zeehektare, Ke 1883 Isibonelelo yayikukubuyisela imihlaba ethathwe eyunivesithi 1876 umgaqo-siseko, ayisi senzo sokubonakalisa.
ngoMatshi 30, 1881, indlu yowiso-mthetho iseka ulwakhiwo nombutho weyunivesithi kwaye yacela unyulo lokufumana indawo yalo. Ngonyulo oludumileyo ngoSeptemba 6, 1881, UAustin (nge 30,913 iivoti) yonyulwa njengendawo eyunivesithi. Galveston, nize okwesibini kunyulo (20,741 iivoti) indawo yesebe lezonyango (U-Houston wayengowesithathu kunye 12,586 iivoti). ngoNovemba 17, 1882, kwasekuqaleni “Ikholeji yaseKholeji,” umsitho osemthethweni wabanjwa ukukhumbula ukubeka ilitye lembombo lesakhiwo esidala. Umongameli weDyunivesithi u-Ashbel Smith, Oongamele umsitho wabhengezwa ngokwesiprofetho “I-Texas ibambelele ematyeni ayo omhlaba kunye neeminerals ngoku ezingasebenzi ngenxa yokungaziwa, Izixhobo zokusebenza kwendawo engasasebenziyo, ubutyebi namandla. Wabetha umhlaba, ubetha amatye ngentonga yolwazi kunye nemithombo yobutyebi obungachazwanga iya kuphuma.” IYunivesithi yaseTexas yavula ngokusemthethweni iingcango zayo ngoSeptemba 15, 1883.
Ithala leencwadi lokuqala likamongameli kwidyunivesithi eyanikezelwa ngoMeyi 22, 1971 nalowo wayesakuba nguMongameli uJohnson, ILady bird Johnson kunye-noMongameli Richard Nixon ababekhona. Yakhiwe kwicala elingasempuma lekhampasi ephambili, iLayibrari yaseLyndon Baines Johnson kunye neMyuziyam yenye yazo 13 amathala eencwadi kamongameli alawulwa nguVimba weSizwe oLondolozo lweeNkcukacha eziBalulekileyo.
Umfanekiso oqingqiweyo kaMartin Luther King, jr. ityhilwe kwikhampasi ngaphakathi 1999 emva koko yenzakaliswa. by 2004, NguJohn Butler, Unjingalwazi kwisikolo samashishini iMcCombs uphakamise ukuba afudukele kwiKholeji yaseMorehouse, ikholeji yabantsundu ngokwembali, “yindawo athandwayo kuyo.”
IYunivesithi yaseTexas eAustin ifumene ulwazelelo kulwakhiwo olutsha kutshanje ngezakhiwo ezininzi ezibalulekileyo. ngoAprili 30, 2006, isikolo savula iMyuziyam yoBugcisa iBlanton. ngo August 2008, I-AT&T kuvulwe iZiko leMfundo eliLawulayo kunye neZiko leNkomfa, nehotele kunye neziko lenkomfa eliyinxalenye yesango elitsha eliya eyunivesithi. kwakhona kwi 2008, Ibala leDarrell K Royal-Texas eSiteyinari landisiwe laya kuba kwindawo yokuhlala 100,119, iyenza eyona nkundla ibalaseleyo (ngokomthamo) kwilizwe laseTexas ngelo xesha.
ngoJanuwari 19, 2011, Iyunivesithi ibhengeze ukwenziwa kothungelwano lwethelevishini iiyure ezingama-24 ngokubambisana ne-ESPN, ebizwa ngokuba yi-Longhorn Network. I-ESPN iya kuhlawula $300 isigidi samalungelo aqinisekisiweyo ngaphezulu 20 iminyaka eya eyunivesithi nakwikholeji ye-IMG, Iqabane lamalungelo emultimedia ye-UT Austin. Inethiwekhi igubungela iimbaleki zedyunivesithi ezinxibelelanayo, umculo, iinkqubo zobugcisa nenkcubeko kwizifundo. Isiteshi kuqala sazisa ngo-Septemba 2011.
Uyafuna Xoxa ngeDyunivesithi yaseTexas eAustin ? nawuphi na umbuzo, izimvo okanye ncomo
IYunivesithi yaseTexas eAustin kwimephu
iifoto: University of Texas e Austin ezisemthethweni kwiFacebook
IYunivesithi yaseTexas kwiAustin
Joyina ukuxoxa ngeYunivesithi yaseTexas eAustin.
izicuku University Medford